Numeri 3 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
3 Nazi ke izizukulwana zika-Aron noMoses mhla uYehova wathethayo noMoses eNtabeni yaseSinayi.+ 2 Ngawo la amagama oonyana baka-Aron: owamazibulo nguNadabhi noAbhihu,+ uEleyazare+ noItamare.+ 3 Ngamagama oonyana baka-Aron lawo, ababingeleli abathanjiswayo baza bamiselwa njengababingeleli.+ 4 Noko ke, uNadabhi noAbhihu bafa phambi koYehova ekunikeleni kwabo umlilo ongekho sikweni+ phambi koYehova entlango yaseSinayi; babengenabo oonyana. Kodwa uEleyazare+ noItamare+ baqhubeka bengababingeleli kunye noAron uyise. 5 Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi: 6 “Sisondeze isizwe sakwaLevi,+ usimise phambi koAron umbingeleli, ukuze silungiselele+ kuye. 7 Yaye simele siyigcine imbopheleleko yaso kuye nembopheleleko yaso kwindibano yonke phambi kwentente yokuhlangana, ukuba siyiphumeze inkonzo yaso emnqubeni. 8 Simele sinyamekele zonke iimpahla+ zentente yokuhlangana, kwanembopheleleko yoonyana bakaSirayeli ngokuthi siphumeze inkonzo yasemnqubeni.+ 9 AbaLevi umele ubanike uAron noonyana bakhe. Bona bangabanikelweyo, benikelwe kuye bevela koonyana bakaSirayeli.+ 10 Ufanele ummisele uAron noonyana bakhe, yaye bamele babunyamekele ububingeleli babo;+ kwaye nabani na ongowasemzini osondelayo makabulawe.”+ 11 Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi: 12 “Uyabona! Mna ndibathabathile abaLevi phakathi koonyana bakaSirayeli esikhundleni samazibulo onke+ avula isibeleko angawoonyana bakaSirayeli; baya kuba ngabam abaLevi. 13 Kuba onke amazibulo ngawam.+ Mhla ndawaxabelayo onke amazibulo ezweni laseYiputa+ ndazingcwalisela onke amazibulo kwaSirayeli ukususela emntwini kuse kwisilo.+ Aya kuba ngawam. NdinguYehova.” 14 Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses entlango yaseSinayi,+ esithi: 15 “Babhalise oonyana bakaLevi ngokwezindlu zooyise, ngokweentsapho zabo. Yonke into eyindoda ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu ufanele uyibhalise.”+ 16 Wababhalisa ke uMoses ngokomyalelo kaYehova, kanye njengoko wayeyalelwe. 17 Ngabo aba oonyana bakaLevi+ ngamagama abo: nguGershon noKohati noMerari.+ 18 Ngawo ke la amagama oonyana bakaGershon ngokweentsapho zabo: nguLibhini noShimeyi.+ 19 Oonyana bakaKohati+ ngokweentsapho zabo nguAmram noItsare,+ uHebron noUziyeli. 20 Oonyana bakaMerari+ ngokweentsapho zabo nguMahali+ noMushi.+ Zizo ezo iintsapho zabaLevi ngokwezindlu zooyise. 21 KwaGershon kwakukho intsapho yamaLibhini+ nentsapho yamaShimeyi.+ Zizo ezo iintsapho zamaGershon. 22 Ababhaliswayo kubo babengangenani layo yonke into eyindoda ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu.+ Ababhaliswayo kubo babengamawaka asixhenxe anamakhulu mahlanu.+ 23 Iintsapho zamaGershon zazingasemva komnquba.+ Zazimise inkampu yazo ngasentshona. 24 Yaye isikhulu sendlu yooyise bamaGershon sasinguEliyasafu unyana kaLayeli. 25 Imbopheleleko yoonyana bakaGershon+ ententeni yokuhlangana yayikukunyamekela umnquba nentente,+ isigqubuthelo+ nomkhusane+ wentente yokuhlangana, 26 namawunduwundu+ entendelezo nomkhusane+ wesango lentendelezo ojikeleze umnquba nesibingelelo, neentambo zaso ezilishumi,+ emsebenzini wazo wonke. 27 KwaKohati kwakukho intsapho yama-Amram nentsapho yamaItsare nentsapho yamaHebron nentsapho yamaUziyeli. Zizo ezo iintsapho zamaKohati.+ 28 Inani layo yonke into eyindoda ukususela konyanga-nye ukusa phezulu lalingamawaka asibhozo anamakhulu mathandathu, enyamekela imbopheleleko yawo kwindawo engcwele.+ 29 Iintsapho zoonyana bakaKohati zazimise inkampu yazo kwicala elingasezantsi lomnquba.+ 30 Yaye isikhulu sendlu yooyise seentsapho zamaKohati sasinguElitsafan unyana kaUziyeli.+ 31 Imbopheleleko yabo+ yayikukunyamekela iTyeya+ netafile+ nesiphatho sezibane+ nesibingelelo+ neempahla+ zendawo engcwele abalungiselela ngazo nomkhusane,+ nomsebenzi wawo wonke. 32 Isikhulu sezikhulu zakwaLevi sasinguEleyazare+ unyana ka-Aron umbingeleli, umveleli wabo banembopheleleko yokunyamekela indawo engcwele. 33 KwaMerari kwakukho intsapho yamaMahali+ nentsapho yamaMushi.+ Zizo ezo iintsapho zakwaMerari.+ 34 Inani layo yonke into eyindoda eyabhaliswayo kubo ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu lalingamawaka amathandathu anamakhulu mabini.+ 35 Yaye isikhulu sendlu yooyise seentsapho zakwaMerari sasinguTsuriyeli unyana ka-Abhihali. Zazimise inkampu yazo kwicala elingasentla lomnquba.+ 36 Imbopheleleko yoonyana bakaMerari yayikukuvelela amanqwanqwa amaplanga+ omnquba nemivalo yawo+ neentsika zawo+ neziseko zawo neempahla zawo+ zonke nomsebenzi wawo wonke,+ 37 neentsika+ ezijikeleze intendelezo neziseko zazo nezikhonkwane zazo+ zentente neentambo zazo zentente. 38 Yaye ngaphambi komnquba ngasempuma, ngaphambi kwentente yokuhlangana ngasempumalanga, kwakumi inkampu kaMoses noAron noonyana bakhe, ababenembopheleleko yokunyamekela ingcwele,+ njengemfanelo yoonyana bakaSirayeli. Kwaye nabani na ongowasemzini osondelayo wayebulawa.+ 39 Bonke ke ababhaliswayo kubaLevi, awababhalisayo uMoses noAron ngokomyalelo kaYehova ngokweentsapho zabo, yonke into eyindoda ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu, babengamashumi amabini anesibini amawaka. 40 Wandula uYehova wathi kuMoses: “Bhalisa onke amazibulo ento eyindoda koonyana bakaSirayeli ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu,+ uthabathe inani lamagama awo. 41 Yaye uze undithabathele—mna Yehova—abaLevi esikhundleni samazibulo onke oonyana bakaSirayeli,+ nezilwanyana zasekhaya zabaLevi esikhundleni samazibulo onke ezilwanyana zasekhaya zoonyana bakaSirayeli.”+ 42 Wawabhalisa ke uMoses onke amazibulo oonyana bakaSirayeli, kanye njengoko wamyalelayo uYehova. 43 Onke amazibulo awabhaliswayo ento eyindoda ngokwenani lamagama awo ukususela konyanga-nye ubudala ukusa phezulu aba ngamashumi amabini anesibini amawaka anamakhulu mabini anamashumi asixhenxe anesithathu. 44 Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi: 45 “Thabatha abaLevi esikhundleni samazibulo onke oonyana bakaSirayeli, nezilwanyana zasekhaya zabaLevi esikhundleni sezilwanyana zasekhaya zabo; babe ngabam abaLevi.+ NdinguYehova. 46 Yaye uze ukhuphe ixabiso lentlawulelo+ ngenani lamazibulo oonyana bakaSirayeli elithe kratya ngamakhulu amabini anamashumi asixhenxe anesithathu kunelo labaLevi,+ 47 ukhuphe iishekele ezintlanu ngomntu ngamnye.+ Zona zifanele zibe ngokomlinganiselo weshekele yendawo engcwele. Ishekele leyo iziigera ezingamashumi amabini.+ 48 Yaye uze uyinike uAron noonyana bakhe imali leyo elixabiso lentlawulelo labo balinani elithe kratya kunelabo.” 49 Wayithabatha ke uMoses imali leyo elixabiso lentlawulelo lokukhululwa kwabo babelinani elithe kratya kunelabaLevi. 50 Wayithabatha kumazibulo oonyana bakaSirayeli imali leyo, iliwaka elinamakhulu mathathu anamashumi mathandathu anesihlanu eeshekele, ngokweshekele yendawo engcwele. 51 Wandula ke uMoses wayinika uAron noonyana bakhe imali leyo elixabiso lentlawulelo ngokomyalelo kaYehova, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.